वेव पेज डिजाइनमा रोजगारी - रोजगार - प्रकाशितः मंसिर २१, २०७२ - नारी
वेव पेज डिजाइनमा रोजगारी
प्रविधिको सुलभताले गर्दा आफूलाई चाहिएको सूचना, जानकारी लिन सम्बन्धित निकायमा पुगिरहनुपर्ने बाध्यता अब छैन। इन्टरनेट जोडिएको कम्प्युटरमा ती सामग्री सजिलै पाउन सकिन्छ । संसारभरका कुनै पनि जानकारी वेव पेजमा फेला पार्न गाह्रो छैन । नेपाली समाज पनि यसमा अभ्यस्त हुने क्रममा छ। कुनै उद्योग, कलकारखाना, सरकारी–गैरसरकारी निकाय, निजी संघसंस्था, व्यापारिक संस्थालगायतसँग सम्बन्धित जानकारी वेव पेजमै उपलव्ध हुन्छन् । सेवा, सुविधा, उत्पादन आदिका सम्बन्धमा जानकारी दिनुका साथै नयाँ घटना क्रमका बारेमा जानकारी दिन यो माध्यम अपनाउने क्रम बढ्दो छ ।
यसरी वेव साइट संचालन गर्ने नयाँ ट्रेन्डले युवापुस्तालाई रोजगारीको अवसर त खोलिदिएको छ नै । यही क्षेत्रमा रोजगारी गरेर जीवनयापन सहज बनाउन पनि सकिन्छ । यो सिर्जनशील काम महिलाहरूका लागि बढी उपयुक्त हुन्छ ।
के हो वेव डिजाइनर ?
वेव साइटको खाका तयार गर्नेदेखि त्यसलाई अनलाइनमा संचालन गर्नेसम्मको काम गर्ने व्यक्ति नै वेभ डिजाइनर हो । सामन्यतया वेव साइट पनि पत्रपत्रिकाकै साजसज्जामा प्रस्तुत गरिन्छ । यसलाई विद्युतीय पत्रिका पनि भनिन्छ ।
सर्भर साइट, स्क्रिप्टिङ र होस्टिङसम्मको काममा दक्षता हासिल गरेपछि वेव डिजाइनर बन्न सकिन्छ। वेव साइटको डमी तयार गर्ने, आकर्षक साजसज्जा दिने, विभिन्न प्राविधिक फङ्सन मिलाउने र अनलाइनमा लाने काम वेव डिजाइनरले गर्नुपर्छ ।
कम्प्युटरमा आधारभूत ज्ञान लिएपछि एउटा छुट्टै प्याकेजअन्तर्गत वेव डिजाइनरको कोर्स गर्न सकिन्छ । राम्रो कम्प्युटर इन्स्टिच्युटबाट छोटो वा लामो अवधिको तालिम प्राप्त गरेर वेव डिजाइनर सम्बन्धी ज्ञान हासिल गर्न सकिन्छ । त्यसो त एकेडेमिक कोर्सअन्तर्गत बीएस्सी कम्प्युटर साइन्स एवं बीसीए कोर्समा पनि वेव डिजाइन अध्ययन गर्न सकिन्छ । तालिम केन्द्रबाट यो कोर्स गर्दा न्यूनतम २० हजार रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यति खर्चले वेव डिजाइनमा डिप्लोमा कोर्स गर्न सकिन्छ ।
के सिक्नुपर्छ ?
यो एउटा प्राविधिक कोर्स हो । यो कोर्स गर्नुअघि कम्प्युटरको आधारभूत ज्ञान लिएको हुनुपर्छ । छुट्टै प्याकेजअन्तर्गत पनि वेव डिजाइनको कोर्स सिकाइन्छ । सुरुमा पेज तयार गर्न विगिनर प्रोगामिङ सिक्नुपर्छ । यसमा एचटिएमएल कोडका सम्बन्धमा जानकारी दिइन्छ । त्यसपछि जाभा स्क्रिप्टमार्फत पेजलाई डाइनामिक बनाउन सिकाइन्छ ।
जाभा स्क्रिप्ट सिकेपछि लेआउट तयार गर्न ग्राफिक्स कोर्स गर्नुपर्छ । त्यसैगरी सर्भर साइट स्क्रिप्टिङअन्तर्गत एएसपी, पिएचपी, जेएसपीमार्फत डाटा वेससँग सम्पर्क गराउने काम सिकाइन्छ । स्टोरेजका लागि डाटा वेस सिक्नुपर्छ ।
एसक्युएल, माइ एसक्युएलको कोर्स गरेपछि त्यसलाई सर्भरमा अपलोड गर्ने काम सिकाइन्छ ।
कुनै पनि कम्प्युटर तालिम केन्द्रबाट यो कोर्स गर्न ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म लाग्न सक्छ । वेवडिजाइनिङका सम्बन्धमा गहन अध्ययन पनि गर्न सकिन्छ ।
वेव डिजाइन गर्ने मानिसमा धैर्य र सिर्जनशीलता हुनुपर्छ । अधीर व्यक्तिले वेवडिजाइनजस्तो झन्झटिलो काम गर्न सक्दैनन् । यसमा एउटा सानो काम गर्न पनि लामो समय लगाउनुपर्ने हुन्छ र मेहेनत पनि उत्तिकै गर्नुपर्छ ।
कहाँ पाइन्छ रोजगारी
आइटी क्षेत्र वेव डिजाइनरका लागि राम्रो प्लेटफर्म हो । सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थामा पनि वेवसाइट बनाउन विज्ञको माग हुनसक्छ । अहिले सरकारी संघसंस्था, एनजीओ, आइएनजीओहरूले आफ्नो अफिसियल वेवसाइट बनाउने क्रम तीव्र छ । कुनै उद्योगमा पनि वेवडिजाइनरको माग हुन्छ । कम्पनीले आफ्नो उत्पादनका सम्बन्धमा जानकारी दिन वेवसाइट संचालन गर्ने भएकाले यस्ता क्षेत्रमा वेव डिजाइनरको आवश्यकता परेको हो । संचार गृहदेखि कमर्सियल रूपमा वेवसाइट संचालन गर्नेहरूमा पनि वेव डिजाइनरको माग हुन्छ । कुनै पनि संस्थामा आबद्ध भएर वा स्वतन्त्र रूपमा वेवडिजाइनरका रूपमा रोजगारी प्राप्त गर्ने प्रशस्त अवसर छन् ।